Jiro fandidiana, latabatra fandidiana, pendant fitsaboana - Wanyu - 雷电竞登
Ny Shanghai Wanyu Medical Equipment Co., Ltd. dia mazàna amin'ny varotra fitaovam-pitsaboana, mifantoka amin'ny marketing amin'ny fitaovan'ny efitrano fandraisam-bahiny, ao anatin'izany ny jiro fandidiana, latabatra fandidiana ary pendantona fitsaboana. Ny vokatra rehetra dia amidy eran'izao tontolo izao, ary manana mpiara-miasa manokana amin'ny maso ivoho any amin'ny firenena maro any Eropa sy Amerika.
Traikefa 16 taona
Vokatra mihoatra ny 60
Mpamatsy volamena: 13
LEDD500 / 700 valindrihana LE ...
Fampidirana LEDD500 / 700 dia miresaka fahazavanaara-pahasalamana LED dobo avo roa heny. Ny trano maivana amin'ny hopitaly dia vita amin'ny firaka aliminioma misy takelaka aluminium matevina ao anatiny, izay tena manampy amin'ny famafana ny hafanana. Ny takamoa dia takamoa OSRAM, mavo sy fotsy. Ny efijery mikasika LCD dia afaka manitsy ny fahazavana, ny mari-pana amin'ny loko ary ny CRI, izay azo ovaina amin'ny ambaratonga folo. Ny sandry mihodina dia mandray sandry alimina maivana ho an'ny fametrahana toerana marina. Misy safidy telo amin'ny sandan'ny lohataona, ...
LEDD620620 Ceiling LED ...
Fampidirana LEDD620 / 620 dia manondro valizy valindrihana miisa roa miorina amin'ny valizy fitsaboana. Vokatra vaovao, izay nohavaozina mifototra amin'ny vokatra voalohany. Akorandriaka alimo aluminium, nohavaozina ny firafitra anatiny, ny vokadratsin'ny hafanana tsara kokoa. Module jiro 7, totalim-bozaka 72, loko mavo sy fotsy roa, takamoa OSRAM avo lenta, mari-pana loko 3500-5000K azo ovaina, CRI avo kokoa noho ny 90, ny fahazavana dia mety hahatratra 150.000 Lux. Ny tontonana fandidiana dia efijery LCD touch, hazavana, loko ...
LEDD730740 Ceiling LED ...
Fampidirana LEDD730740 dia manondro hazavana fandidiana fitsaboana karazana petal roa. Ho an'ny efitrano fandidiana miaraka amina boaty manadio, ny karazana felana dia afaka misoroka ny fikorianan'ny rivotra ary mampihena ny faritra mikorontana amin'ny fikorianan'ny rivotra laminera. Ny hazavana fandidiana indroa LEDD730740 dia manome ny hazavan'ny 150,000lux sy ny mari-pana amin'ny loko 5000K ary ny max CRI an'ny 95. Ny masontsivana rehetra dia azo ovaina amin'ny ambaratonga folo amin'ny tontonana fanaraha-maso ny efijery LCD. Ny tahony dia vita amin'ny fitaovana vaovao, resistan ...
LEDD500 / 700C + M valindrihana ...
Fampidirana LEDD500700C + M dia manondro hazavana efitrano fiasana LED dome roa. Rafitra fakantsary namboarina sy fanaraha-maso mihantona ivelany dia azo ampiasaina amin'ny tanjona fampiofanana. Izy io dia ahafahana manao fanaraha-maso sy fandraketana an-tsoratra. Ampiharo amin'ny ■ fandidiana kibo / ankapobeny ■ mpitsabo aretim-bavony ■ fandidiana fo / lalan-dra / fivontosana ■ neurosurgery ■ orthopaedic ■ traumatology / vonjy maika OR ■ urology / TURP ■ ent / Ophthalmology ■ endoscopy Angiography Feature 1. Rafitra fakan-tsarimihetsika fakan-tsary, tsy mila ahantona miaraka amina set hafa ...
TS Manual Hydraulika Su ...
Fampidirana TS latabatra fandidiana hydraulic dia sui ...
Fampidirana TDY-1 latabatra fandidiana herinaratra ado ...
TDY-Y-1 multi-tanjona ...
Fampidirana TDY-Y-1electric hydraulic operatin ...
Fampidirana FD-G-2 latabatra bevohoka maro samihafa ...
Fampidirana TS-D-100 dia manondro elec arme double ...
TS-DQ-100 Double Arm E ...
Fampidirana TS-DQ-100 dia manondro ny sandry sandry ele ...
Fampidirana QF-JX-300 dia manondro ny ICU br ...
Fampidirana TD-TS-100 dia manondro ny fanafody mitambatra ...
Adiresy: 1401房间,tranobe iraisam-pirenena商cheng, No.505, Caoyang Road, Shanghai